वाह ! क्या ‘गेस’ छ बाई !! | PaniPhoto
वाह ! क्या ‘गेस’ छ बाई !!	दिपध्वनी / April 18, 2012 /2Comments ‘तिमीहरु साइन्स पढ्नेले जस्तो किताबै पढ्नु पर्ने हो र हाम्ले !’ केहि बर्ष पहिले हातमा पिलन्धरे गेसपेपर बोकेर पढिहिड्ने एकजना साथीलाई मैले ‘किन किताब नपढेर यस्तो पत्याइहिडेको’ भनेर प्रश्न सोध्दा यसो भनेको थियो उसले । उसले मानविकी पढ्थ्यो । मानविकीमा कसरी प्रश्न आउँछन् हामीलाई के थाहा र ! हामीले त कुन किताबको कुन च्याप्टर कुनको कुन भन्दै खोजेर पुरा कोर्स पढ्नु पर्ने । अहिले बरु कति बिषयको एउटै ‘टेक्स्ट बुक’ निस्किसकेका रहेछन् । सिला खोजेर पढ्ने हाम्रो लागि त उसको गेसपेपरले नै परिक्षा धान्ने भनेपछि अचम्म हुने नै भयो । उसको परिक्षामा त्यो अर्काले गेस गरेको गेस पेपरबाट कति गेस मिल्यो त्यो चै सोध्न बिर्सिएछ । तर आज अचम्मसँग एउटा गेसपेपर र यही बर्ष मानविकीको अनिवार्य अंग्रेजीको प्रश्नपत्र हात लाग्यो । यसपाली अनिवार्य अंग्रेजीको प्रश्नहरु अधिकांश त्यहीबाट निकालिएका(?) रहेछन् । किताबका पाठहरुमा गेस गरिएको प्रश्न आए त्यति अचम्म नहुँदो हो तर यहाँ त किताब बाहिरबाट आउँने र ग्रामरका प्रश्नहरु रिठ्ठो नबिगारी सारिएको रहेछ । भित्र तस्विरमा हेर्नुहोस्
यसपालीको अनिवार्य अंग्रेजीको प्रश्नपत्र
रातोले चिन्ह लगाइएकाहरु गेसपेपरमा जस्ताको तस्तै भेटिए ।
गेसपेपरमा भेटिएका प्रश्नहरु ए बाबा ग्रामरका प्रश्न त नसारेको भए पनि हुने नि । हेर्नुस् न जस्ताको तस्तै सारिदेको पो छ त । यो प्रश्नपत्रको प्रश्न नम्बर १ मा छ ।
यो प्रश्नमा गेसपेपर र प्रश्न पत्र दुबैमा काठमाण्डौ र धरान भनिएको छ । अरु शहरको नाम राखिदिएको भए नि हुन्थ्यो तर गेसपेपर पढ्ने झुक्किने पो हो कि ! यो प्रश्नपत्रको प्रश्न नम्बर ३ मा छ ।
यो अर्को किताब बाहिरबाट आएको प्रश्न । यसरी सारिएको छ कि मरेको झिंगो टास्ने कथा मिल्ने जस्तो लाग्छ । यो प्रश्नपत्रको प्रश्न नम्बर ८ मा छ ।
अब यो अर्को । यसमा पनि रिठ्ठो बिराएको छैन । यो प्रश्नपत्रको प्रश्न नम्बर ९ मा छ ।
अब यो झन् साइन्स फिक्सनका बारेमा छ । कस्तो डेन्जर कन्डिसन मिलेको । यो प्रश्नपत्रको प्रश्न नम्बर ११ मा छ ।
यति धेरै प्रश्नहरु जस्ताको तस्तै कुनै गेसपेपरबाट मिल्छ भने के भन्ने, गेसपेपरबाट प्रश्नहरु तानिएको हो कि प्रश्नहरु प्राप्त गरेर गेसपेपरमा राखिएको हो ? गेसपेपर छाप्ने प्रकाशकले पैसा दिएर प्रश्नहरु लिएको नहोला भन्न सकिन्छ ? तपाईलाई के लाग्छ, संयोग या षड्यन्त्र ? कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोस् ।
Tags: guess paper in nepali exam, guess paper online, online solution and guess paper / Posted in: खुल्ला बहस
अनन्त पोखरेल says: April 19, 2012 at 10:15 am / Reply
जो चै quistion sellection मा बसेको छ उसैको गेसपेपर कम्पनि छ अनि भैहाल्छ नि मालामाल । quistion सिधै गेसपेपरबाट सार्दा समय पनि बचत पैसो नि बबाल । अनावस्यक दिमाग लगाउनु नि नपर्ने क्या आईडिया छ बाई….
Lal Darsan Rai says: April 19, 2012 at 12:02 pm / Reply
this is the only root cause for unemployment in the country…